I-Snapdragon 712: Iprosesa entsha yaphakathi kuluhlu lweQualcomm | I-Androidsis
I-Snapdragon 712: Inkqubo entsha yeQualcomm
Kunyaka ophelileyo uQualcomm wothuswe luluhlu lwenkqubo entsha, ukwazisa i-Snapdragon 710. Iprosesa entsha, eyenzelwe i-premium mid-range, icandelo elikhulayo kwimarike. Ngoku, inkampani yaseMelika ineprosesa entsha esiyifumana ngaphakathi koluhlu lulungile. Imalunga neSpapdragon 712.
Le Snapdragon 712 uphononongo lwemodeli yonyaka ophelileyo. Kwangokunjalo kwenziwe uphuculo oluninzi ngokufanayo. Ke ngoko, enkosi kubo, yiprosesa eyenzelwe ukudlala imidlalo kwiifowuni. Bajolise kuphuculo lwentsebenzo iyonke, olu phuculo.
Iprosesa entsha evela kwinkampani ayimeli ukutsiba okukhulu kumgangatho xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Uphuculo lwenziwe kuyo, ngakumbi yenzelwe imisebenzi yemultimedia kunye nemidlalo. Ngaphandle kwamathandabuzo, yinto enokuvula le processor kwicandelo elitsha leemodeli, ngoku ukuba umdlalo ufumana ukubaluleka kwi-Android.
1 INew Snapdragon 712
2 Iikhamera kunye nokunxibelelana
INew Snapdragon 712
Njengoko besesitshilo, utshintsho olufika kwi-Snapdragon 712 alukho lukhulu kakhulu. Olunye lotshintsho lokuqala esilufumanayo kukunyuka kwamaxesha ewotshi. Kuba inkulu kune modeli yangaphambili. Uyilo loyilo luyafana kule meko, ngeeKyro 260 cores ezisibhozo. Nangona kule meko yenziwa ngesantya se-2,3 GHz, ukugcina i-GPU efanayo kunyaka ophelileyo, i-Adreno 616.
Ngokumalunga nenkxaso yememori ye-RAM asinakho utshintsho. Ihlala kwi-16 GB ye-Snapdragon 710. Apho sinokulindela ukuba utshintsho lusemandleni, njengoko besitsho kwiQualcomm kwinkcazo yayo. Kungenxa yokuba sijongane neprosesa enamandla ngakumbi kunangaphambili. Ngokwenkampani, I-Snapdragon 712 yi-10% enamandla ngakumbi kunangaphambili.
Le yinto Abasebenzisi kufuneka baqaphele ngakumbi xa bedlala imidlalo. Kungenxa yoko le nto ithathwa njengeyona processor ilungileyo xa kusenziwa umdlalo. Ukongeza, kuye kwaqinisekiswa ukuba le Snapdragon 712 ifika nenkqubo yokutshaja okukhawulezayo. Kule nto banentlawulo ekhawulezileyo ye-4 +, yeyona protocol yamuva yenkampani, enye yezinto ezininzi kwi-Android namhlanje.
Iikhamera kunye nokunxibelelana
Eminye, le processor entsha yeQualcomm ayisishiyi neenguqu ezininzi ezongezelelweyo xa kuthelekiswa nemodeli yangaphambili. Ukusukela xa kufikwa kunxibelelwano, iSnapdragon 712 isishiya singatshintshanga. Inemodem yeX15 Unesakhono sokufikelela kwisantya ukuya kuthi ga kwi-800 Mbps yokukhuphela kunye ne-150 Mbps yokulayisha. Itekhnoloji ye-4 × 4 MIMO iphunyezwe kwi-LTE kunye netekhnoloji ye-2 × 2 ye-WiFi.
Asifumani lutshintsho kwiikhamera, kwinkxaso yazo, ngale Snapdragon 712. Njengakwimodeli yonyaka ophelileyo, ifika ngenkxaso yeekhamera ukuya kuthi ga kwi-32 MP okanye ukuya kwi-20 MP kwimeko apho iphindwe kabini ikhamera kwisixhobo. Ngale ndlela, isetyenziselwa zombini ngaphambili nangemva kwekhamera yesixhobo. Ukongeza, kukho ithuba lokurekhoda ividiyo ngesisombululo se-4K.
Kunyaka ophelileyo besele sidibene ezinye iimodeli ezize neSpapdragon 710 njengeprosesa, njenge Xiaomi yam 8 Lite okanye Nokia 8.1, phakathi kwabanye. Kodwa ayisiyiyo le processor sibonileyo rhoqo kwimarike. Ke ngoko, kulindeleke ukuba ngale processor intsha imeko iya kutshintsha kwaye iya kubonakala kwiimodeli ezininzi. Ngokukodwa ngenkqubela phambili ye-premium mid-range kwi-Android.
Okwangoku akukho kwaziwa malunga nokukhutshwa kweSpapdragon 712. Akukho datha inikiweyo ukuba imveliso efanayo iya kuqala nini. Kwaye akukho nto siyaziyo, ubuncinci okwangoku, malunga nokuba zeziphi iifowuni eziza kuba zezokuqala ukusebenzisa iprosesa yophawu. Sinethemba lokufumana ulwazi olutsha malunga noku kungekudala. Kude kube ngoku, kuya kufuneka sihlale ngokuzazi iinkcukacha zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Snapdragon 712: Inkqubo entsha yeQualcomm
I-ZTE ivula ubhaliso lwabasebenzisi be-Axon 9 Pro abafuna ukufumana i-Android Pie beta